Aeroflot inodzima dzese Bangkok nendege nekuda kwenjodzi muAfghanistan airspace
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » mhosva » Aeroflot inodzima dzese Bangkok nendege nekuda kwenjodzi muAfghanistan airspace
Afghanistan Kuputsa Nhau • Airlines • nhandare yendege • avhiyesheni • Kuputsa Nhau dzeEurope • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • mhosva • nhau • Kuvakazve • Kutarisirwa • Russia Kuputsa Nhau • chengetedzo • Thailand Kuputsa Nhau • ushanyi • kutakura • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Kufamba Wire Nhau • Trending Now • Akasiyana Nhau
Hazvichakwanise kutenga tikiti kubva kuMoscow kuenda kuBangkok munaGunyana kana Gumiguru gore rino pane webhusaiti yeAeroflot.
Russian mureza anotakura anomisa Bangkok mameseji emhepo.
Aeroflot inodzivirira nzvimbo yemuchadenga yeAfghanistan, matemo eThailand.
Thailand inobvumidza chitupa chekudzivirira chekuRussia chekupinda kwevashanyi.
Russian mureza mutakuri Aeroflot akadzima ndege kuenda kuguta reThailand, Bangkok, nekuda kwenjodzi munzvimbo yemuchadenga yeIslamic Republic yeAfghanistan.
Hazvichakwanise kutenga tikiti kubva kuMoscow kuenda kuBangkok munaGunyana kana Gumiguru wegore rino pa Aeroflot webhusaiti. Bangkok kubhururuka kwenzvimbo kungovhurwa kusvika Nyamavhuvhu 21, 2021.
Sezvineiwo, zviremera zveThai zvazivisa nhasi mvumo iripedyo yakapihwa vashanyi veRussia kupinda muThailand ine chitupa cheCOVID-19 kubaiwa nemushonga wekuRussia wakagadzirwa Sputnik V.
Pakutanga, vafambi vasina chitupa cheCOVID-19 yekudzivirira neimwe yeanodziikanwa pasi rose majekiseni ekuMadokero, saModerna, Pfizer kana AstraZenica, vaifanira kupfuura nekumanikidzwa kwevhiki mbiri.
Parizvino, matenga ari pamusoro peAfghanistan ane njodzi zvakanyanya nekuda kwesangano remagandanga eTaliban, iro rakatora masimba muRepublic.
NeSvondo, Nyamavhuvhu 15, guta guru reAfghanistan, Kabul, rakawira kurwisa kweTaliban. Ikozvino pane chirevo paKabul's Hamid Karzai International Airport, semapoka evagari vemunharaunda vari kuyedza kubhururuka kunze kwenyika, kutiza kutonga kweTaliban.
Ndege dzinobva kuKabul ndidzo dzinoitika pano neapo uye dzinoenda uye kudzima nguva dzose seTaliban nguva nenguva 'inomisa' ndege dzese kunze kweguta.
Toronto to Grenada ndege paAir Canada izvozvi
Nyowani Sensual Vegan Chocolate
VeLondon vakashora COVID uye vakazorora kunze kwenyika kupfuura ...
Chitsuwa cheItaly cheVulcano chakabviswa pamusoro pezvinouraya ...
New Luxury: Iyo Tasman Inozivisa Australia Debut
China neDominica Zvino Vhura Kufamba Pakati peVaviri Vavo ...
Gore Riri Kukuvadzwa Nekuda Kwekunyara Kwevashandi
Iberia Advance Passenger Ruzivo Kuburikidza Nyowani ...
Barcelona Summit inotsanangura ramangwana rakasimba re ...
Waini - Chenin Blanc Yambiro: Kubva kuYummy kuenda kuYucky
Mushonga mutsva weAntiviral Oselavir Wotangwa muChina
Air Canada inowedzera huwandu muVancouver
Gurukota rezvekushanyirwa kweJamaica Vachitaura Zvino paAnchor ...